Australia oo Soomaaliya ka saartay dalalka ay dadkooda dib u dejinta u sameyneyso | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Australia oo Soomaaliya ka saartay dalalka ay dadkooda dib u dejinta u...
Australia oo Soomaaliya ka saartay dalalka ay dadkooda dib u dejinta u sameyneyso
Wasaaradda Arrimaha Gudaha dalka Australia ayaa waxa ay sheegtay wadamada Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Iran in ay ka saartay liiska waddamada ka faa’ideysan kara mashruuca Bani’aadamnimo ee dadka Soo galootiga ah ee ay dib u dejinta u sameeyaan.
Australia oo aanan shaacin sababta rasmiga ah ee ay falkan u sameysay ayaa dadka ka soo jeeda Saddexdan dal ee codsiyada diyaarsaday waxaa loo sheegay in aysan suuragal aheyn in xilligan la qaabilo, oo waqti uusan ka lumin.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Australia “Go’aankan wuxuu ka soo baxay Dowladda, dalalka Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Iran dadka ka soo jeeda ayaan ka saarnay liiska dadka ka faa’ideysan barnaamijka dib u dejinta, mar walba waxaan ku shaqeynaa sharci iyo nidaam.”
Barnaamijkan wuxuu qorshihiisa yahay in ay ka faa’ideystaan dadka ka soo jeeda dalalka ay colaadaha ka jiraan, wadamada hada loo ogolyahay Barnaamijka dib u dejinta ayaa waxa ay kala yihiin Democratic Republic of Congo, Afghanistan, Eritrea, Ethiopia, Myanmar, Bhutan, Syria iyo Iraq.
Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa aad u cambaareeyay falkan ay gaartay xukuumadda Australia, waxayna tilmaameen in arrinkan uu yahay mid midab takoor ah oo aanan loo baahneyn